Dargaggoonni Oromoo yeroo ammaa kana waan danda'aniin Oromummaaf yeroo hojjetan abdiin dura keenyaa jiru abdachiisaa akka ta'e of fuulduratti ilaalaa jirra. Yeroodhaa yerootti barattoota keenya qaroo diinni nujalaa cabsus, kan hafan akkasumas Oromummaa isaaniitti quuqama kan qaban hojii boqonnaa isaan dhowwatee wixxifachiisuun ulfa ciniinsuu yaadaa baatanii jooru. Yeeyyis Birruu dargaggoo jaboo kennaa guruguddaa qabu: ogeessa faayyaa, aartii Oromoo hedduu, fiilmii barreessuufi kkf dhaangi'amedha. Waltajjii geggeessuu, gumii aadaa, afaaniifi seenaa irratti nama halkaniif guyyaa hojjetaa ture ta'uu nan beeka. Dargaggoonni akkas hojii boonsaa hojjetan akkuma jiran gantoonni faayidaa yeroof lammiisaanii basaasanii afaan diinaa buusanis hinjiran jechuuf miti. Yeeyyis ammallee kitaaba yeroo sadii sabaan gaheen cinatti hojii fiilmii bareedaatti jira. Kitaabnisaa biroonis xumuramanii jiru.
Jechoonni Yeeyyis barruufi hojii aartii keessatti fayydamu yeroo baay'ee falaasama addaan kan guutaniidha. Namni kun miidiyaalee Oromoof hojjetan maratti dhiyaatee fakkeenyaa bu'aa ba'ii jireenyasaatii akka obbolootasaa addunyaarra faffaca'anii jiraatan kana barsiisuuf akka dhiyaatuuf jecha seenaasaa gabaabaafi teessoosaa guutuu akka armaan gadiitti dhiheesseen jira. Namoota aartii kanaan sammuu sabaa bilisoomsaa jiran yeroo hundaa jajjabeessuu, eeggachuufi kunuunfachuu keenya ittuma fufna. Egaa Yeeyyis Birruu eenyu? Yeeyyis kan dhalatee guddate abbaasaa Obbo Birruu Nagaroofi haadhasaa Aadde Geexee Guddinaa irraa Oromiyaa Lixaa, Gimbii ganda baadiyaa Maarache Wadaboo jedhamutti. Jireenya baadiyummaa sana dhamdhamee, abbuqqatee kan arge gaafuma qaroonsaa ifa dachee kanaa argeedha. Raafuu bidden boqolloo asheetii iraatti jigasanii nyaachuun, agadaa hundeetti buruqsanii jiidha isaan maddii of tortosaa alanfachuun, loon tiksuudhaaf baahanii agamsa bilchaataa qaxxisanii kutachuun, ija baddeessaafi gooshuu nyaatanii erga quufanii hari’anii wal tumuun, aduu lixa gara galgalaa loon toora galchanii, bookeefi qarxaasaadhaan wal faccisaa deebi’anii galuun, dhaaba dammaa abba-sadan walitti cuffatanii nyaachuun jireenya umurii sana keessatti isa guddisuuf isatti wal jijjiranii isa bohaarsaa turaniidha. Abbaansaa egeree jireenyasaatii guddisuuf, mul’ata isa keessatti biqilchuuf bor nama taatee, eenyummaakee bartee isa eenyummaasaa wallaalemmoo gorsitee, qanansiiftee yoo si didee si falmemmoo falmisiiftee, amansiiftee bidiruu eenyummaa keessatti dhaloota dhufu guddisuuf har’a yoo baratteedha isaan jedhee baruuleefi kobbee harkatti kennee gara Mana Barumsaa Maarache Wadaboo Sadarkaa 1ffaa tti isa erge.
Yeeyyis barruu Nagaroo
Hawwasicha keessatti erga guddatanii bilchaatanii mana barnootaa seenuufi suuta barachuun yoo amaleeffatamee daa’ima oladeemaa keessatti abdii horuudhaa baateyyuu, fakkeenya barataa gaarii kan seenaa isaa keessatti Kutaa 7ffaa qofaasaa baratee xumuree, yeroo har’aa ispeeshaalistii baqaqsanii hodhuu ta’ee lammiisaa gargaaraa jiru Dr Araggaa Fiqaaduu Lataa tiin isa gorsuun isaanii mul’ata guddaa Yeeyyis keessatti biqilche. Mana Barumsaa Sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa keessatti fedhiin inni guddina aadaafi Afaan Oromootiif qabu gama aartiidhaan; baacoo, oduu durii, walaloofi diraamaatiin gumii garaagaraa keessatti qooda fudhachuudhaan hirmaataa tureera. Gara barnoota sadarkaa Olaanaatti erga cee’ees daandiin barnootasaatii gama ogummaa fayyaatiin yoo ta’ellee Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti Gumii Aadaafi Dagaagina Afaan Oromoo (GADAO)tiin guundoo booree dhaloota har’aaf hiixatamu itti darbees fuudheera, aarsaas kanfalee gaaffii sababa warraqsa barattootaa GADAO keessatti qabaniin isaaf dhiyaatuuf dura dhaabatee falmaa tureera.
Dabareesaammoo barattoota isa boodaan dhufanitti galaa yoo bubbule hinaloofne imaanaa imimmaaniin walmakeen hojii GADAO jabaatanii akka hojjetaniif dabarsee isaanitti kenne. Ittiyyuu caalee quuqama, eelaa, madaa, meeluu, cabaafi cuunfama lammiinsaa qabuufi isa ija warra garaan buluutiin yoo ilaalame nagaafi boqonnaa fakkatu garuu osoo baala hingogsin hidda hundee lafa keessatti cuffatee raammessaa jiru sana iciitasaa hubatee dhaloota jiru irratti dammaqsuuf gama hojii barreeffamaatiin qiyyaafatee lammiisaa tajaajilaa jira. Ogeessa fayyaa ta’auun rakkoo qabaatee miti, ogummaa tokko qofatti rarraa’anii rakkoo hawaasichi gama diinagdee, hawaasaafi siyaasaatiin qabuuf mannaaguu dhiisuun, ana hinilaallatu jedhanii kafana gabrummaafi golgaa hiyyummaa ho’ifatanii foon gabbisuun ija lammii midhamaa duratti yakka, fuula uumaa durattimmoo cubbuu natti fakkaata. Kanaaf kennaa uumamaa uumaan isaaf kenneetti fayyadamee rakkoo guboo hawaasichi qabu ifa baasuufi furmaata isaammoo itti barbaaduuf, yoo isa rafe sosochosanii kaasaniidha malee ofiyyuu itti dabalamanii rafuun, utuu hinnyaatin quufeera jechuun, madaafi godaannisa sammuu lammii ofiitti fe’anii fayya buleessa jechuun wadaroo gola garbummaatti nu gudunfe sana nutti dheeressa jedhee dhidhiittachuu eegale. Kunoo kana kan addunyaa barreeffamaa keessa Yeeyyisiin galche. Kitaabasaa jalqabaa asoosamaa Ilkee Arrabaa maxxansa tokkoffaa utuma barnootarra jiruudha kan harka dubbiftootaa dhaqqabsiise.
Yuunivarsiitii Wallaggaarra digirii jalqabaa ogummaa fayyaa(BSc) tiin xumure. Maxxansi lammaffaan immoo utuu gara dirree hojjii ogummaasaatiitti qaari’aa jiruuti. Yeroo amma Hospitaala Naqamteetti du’aatii haadholiifi daa’immanii hir’isuu iratti hojjechuun jabaatee hawaasasaa tajaajilaa jira, haata’u malee wanti beekamaan uummata dhukkubsatee daawaa barbaachaaf isa bira dhufe qofadha kan inni gargaaru. Garuu lammii akka dhukkubsatee jiru hinbeekneefi manca’insi isatti adeemaa jiru ofirratti hubataa hinjirreef hojjechuuf immoo dirqama isatti ta’eera. Kanuma hadheeffachuun Ilkee Arrabaatti aansee Kitaaba Asoosamaa Cuunfaa Dhiigaafi Kitaaba Walaloo Silgaa jedhamuu dubbistootaaf dhiyeessuudhaan akkasumas hojii fiilmii Afaan Oromoo irratti bobba’uudhaafis murteeffatee ka’eera.
Teessoo armaan gadiin isa jajjabeessaa Oromoon !
Teessoon: Bilbil-sochii. 0917136806 0913714997
E-mail: yeyisbiru@yahoo.com ilkearaba@gmail.com
Beekan Gulummaa Irranaa Mardaasaa, 2015 Harvard University,beekanguluma@gmail.com